Ronaldinho Iyo Wararkii Ugu Danbeeyey Ee Ka Soo Kordhay? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Xiddigii hore ee xulka Brazil iyo kooxda Barcelona Ronaldinho ayaa ku sii jiraya dambigiisa ka dib markii loo qabtay inuu galay baasaboor been abuur ah isagoo sheegay in sharci darada dukumiintiga ay aheyd wax la yaab leh.
Ronaldinho iyo Roberto Assis walaalkii hore ee kubada cagta iyo wakiilka, ayaa la xidhay bishii Maarso 6 wax yar ka dib markii ay yimaadeen Asuncion si ay kor ugu qaadaan buugga iyo bilaabida khamaarka khadka tooska ah.
Maamulka maxalliga ah ayaa la wadaagay sawir muujinaya waxa u muuqday kaadhka aqoonsiga Paraguayda ee wata magaca iyo sawirkiisa Ronaldinho, iyadoo xiddigii hore ee Ballon d’Or iyo walaalkiis xabsiga loo taxaabay inkasta oo dacwad-qaadayaashu soo jeediyeen xayiraad ka duwan kan, iyagoo ku dooday in labada nin khiyaano sameeyeen.
Labadan lamaane ayaa ka mudaaharaaday danbi la’aan laakiin waxay 32 cisho ku xidhnaayeen xabsi ka hor intaan la siidayn oo la dhigay hoteel ku yaal hoteel 8-dii Abriil.
In kasta oo baaritaanka uu socdo, Ronaldinho wuxuu bixiyay wareysigiisii ​​ugu horreeyay tan iyo markii la xiray, isagoo ku adkeystay inuusan wax fikrad ah ka haysanin kaarka aqoonsiga inuu yahay mid been abuur ah.
“Gabi ahaanba waan la yaabnay markii aan ogaanay in dukumiintiyada aysan aheyn mid sharci ah” Ronaldinho ayaa u sheegay TV-ga Paraguay ABC Color.
“Tan iyo xilligaas ujeedkeennu wuxuu ahaa inaan la shaqeyno caddaaladda si aan u caddeyno xaqiiqda, sida aan ku jirnay bilowgiiba. Laga soo bilaabo xilligaas ilaa maanta, waxaan sharraxnay wax walba oo aan fududeyney wax kasta oo caddaaladda na weydiisay.
“Waxay aheyd dharbaaxo adag, waligey kumama fikirin inaan ku dhici doono xaalad sidan oo kale ah. Nolosheyda oo dhan waxaan raadsanayay inaan gaaro heerka ugu sareeya xirfadeed waxaanan ku faraxsanahay dadka kubaddeyda.
Waxaan rajeyneynaa inay isticmaali karaan oo ay xaqiijin karaan wax walba oo aan bixinno sida ugu dhaqsaha badan ee kiiskayaga ah oo aan uga bixi karno xaaladdan.
“Wax walba oo aan sameyno waxay ku hoos jiraan qandaraasyo uu maareynayo walaalkay, kaasoo ah maamulahayga. Xaaladda jirta, waxaan u nimid inaan ka qeybgalinno bilaabidda khamaarka khadka tooska ah, sida ku xusan heshiiska, iyo soo-saarista buugga ‘Craque’ da Vida ‘kaas oo lagu abaabulay shirkad ku taala dalka Brazil oo leh xuquuq ay ku isticmaali karto buugga Paraguay. “
Ronaldinho Xiddigii hore kooxaha Barca, Paris Saint-Germain iyo Milan ayaa 97 kulan u saftay xulka Brazil intii u dhaxeysay 1999 iyo 2013.
Wuxuu dhaliyay 33-jeer wuxuuna qeyb muhiim ah ka ahaa kooxdii ku guuleysatay Koobkii Adduunka 2002.
Agustin Rodriguez Goolhayihii Hore Kooxda Real Madrid Ayaa Laga Xanuunka Coronavirus?